$475 နဲ့မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Xiaomi Mi 7! – AsiaApps
$475 နဲ့မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Xiaomi Mi 7!
January 29, 2018 January 30, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on $475 နဲ့မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Xiaomi Mi 7!
Xiaomi ရဲ့ Mi7ဟာတော့မကြာခင် လအနည်းငယ်မှာပဲ $475 နဲ့ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်အရှေ့က model တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi6တုန်းကတော့ စျေးနှုန်းဟာ $360 နဲ့ $435 အတွင်းမှာပဲရှိခဲ့တာပါ။ အဲ့တော့ Mi6နဲ့ Mi7တို့ရဲ့စျေးနှုန်းအပိုင်းဟာ အရမ်းကြီးကွာဟသွားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။
The price is expected to be justified with Snapdragon 845 chipset, 8 GB RAM and 5.65” display with FullHD+ resolution. There is alsoarumor aboutaPlus-version that will havea6.01″ OLED panel.
စျေးနှုန်းကွာဟမှုအရ Mi7မှာပြောင်းလဲသွားတာတွေကတော့ RAM, CPU အပိုင်းနဲ့ အရွယ်အစားအပိုင်းလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Resolution အပိုင်းက HD+ လို့ဆိုထားပေမယ့် လက်တွေ့မှာတကယ်ယှဉ်ကြည့်မှကွာဟမှုကိုသိရှိနိုင်မှာပါ။ Mi6ထွက်ရှိတုန်းက RAM ဟာ4GB နဲ့6GB နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Mi7မှာတော့ RAM ဟာ 8 GB ဖြစ်သွားပါပြီ။ CPU ပိုင်းမှာလည်း Mi6မှာ Snapdragon 835 ဖြစ်နေပြီး Mi7မှာတော့ Snapdragon 845 ဖြစ်သွားမှာပါ။ အရွယ်အစားမှာ Mi6ဟာ ၅.၁၅ လက်မရှိနေပြီး Mi7ဟာတော့ ၅.၆၅ လက်မရှိနေမှာပါ။ Mi7plus version မှာတော့ ၆.၀၁ လက်မအထိဖြစ်သွားမှာပါ။ Plus version မှာ OLED display ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Rumor image of Xiaomi Mi 7
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ Mi6နဲ့ Mi7တို့ရဲ့ကွာဟချက်အနည်းငယ်ပါ။ အရင်တစ်ပတ်ကတော့ Xiaomi Mi7ကို ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမယ့် MWC မှာထုတ်ဖော်ပြသသွားမယ်လို့တော့ကြားမိတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Mi7ကို MWC 2018 မမိတ်ဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထပ်မံကြားရပြန်ပါတယ်။ သတင်းတွေကလည်းမျိုးစုံထွက်ရှိနေတာကြောင့် ဘယ်သတင်းဟာ မှန်ကန်မှုရှိလည်းဆိုတာကိုတော့ 2018 MWC ရောက်မှသိရှိရတော့မှာပါ။
ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း Zanco Tiny t1
Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, Pixel နဲ့ Pixel XL တို့ကိုစျေးလျှော့ရောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Dailysteals!